चुलिँदै शोधभर्ना बक्यौता | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर चुलिँदै शोधभर्ना बक्यौता
चुलिँदै शोधभर्ना बक्यौता
विजय दमासे/रञ्जु काफ्ले
काठमाडौं । महत्त्वाकाङ्क्षी ठानिएका ठूला आयोजनाका प्रमुखले सम्झौताविपरीत दातालाई बढी खर्च देखाउँदा सरकारले दाताबाट लिनुपर्ने रू. ५० अर्बभन्दा बढीको बक्यौता शोधभर्ना नहुने देखिएको छ । विदेशी लगानीमा सञ्चालित आयोजनामा सम्झौताभन्दा बाहिर गएर खर्च गर्ने तर त्यसको लेखापरीक्षण गराउन नसक्दा दातृ निकायबाट शोधभर्ना हुनुपर्ने सो रकम बक्यौता भएको हो । यसबाट सरकारले ती आयोजनामा आन्तरिक स्रोतबाटै ठूलो रकम बेहोर्नुपर्ने भएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव)को फागुन महीनासम्म दातृ निकायबाट शोधभर्ना लिने गरी रू. ४३ अर्ब खर्च गरिसकेको छ । गत आवमा पनि करीब रू. ४३ अर्ब यस्तो खर्च भएको थियो । त्यसै अवधिमा सरकारले खर्च भएकोमध्ये रू. ३५ अर्ब शोधभर्ना प्राप्त गरेको छ । उपमहालेखा नियन्त्रक रुद्र भट्ट आयोजना प्रमुखहरूको लापरबाहीले सरकारको रू. ५० अर्बभन्दा बढीको बक्यौता उठ्नै नसक्ने गरी जोखीममा परेको अभियानलाई बताए ।
उनका अनुसार विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाहरूले समयमा लेखापरीक्षण नगर्ने र दातृ निकायसँग आयोजना सञ्चालनसम्बन्धी भएको सम्झौताविपरीत अनावश्यक खर्च समावेश गरेर रकम माग गरेपछि शोधभर्ना हुन नसकेको हो । ‘दाताहरू सम्झौताविपरीतका खर्च मागले चिढिएका छन्, त्यसैले तदारुकताका साथ काम गर्न सकिएन भने शोधभर्ना नहुन पनि सक्छ,’ उपमहालेखा नियन्त्रक भट्टले भने ।
विदेशी सहयोगमा सञ्चालन हुने परियोजनामा पहिले सरकारले बजेट खर्च गरेर काम गर्ने र पछि सो खर्चको शोधभर्ना दातृ निकायबाट लिने कानूनी व्यवस्था छ । पहिले सरकारले खर्च गर्ने र पछि दातृ निकायबाट शोधभर्ना गरी खर्च व्यवस्थापन गर्न छुट्याइने कोषलाई चलनचल्तीको भाषामा ‘म्याचिङ फण्ड’ भनिन्छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भूकम्पको समयमा गरेको खर्च र आफू मातहतका परियोजनासमेतको शोधभर्ना गराएको छैन । अर्थ, शिक्षा, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास,शहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार, सिँचाइ, कृषि, स्वाथ्य र खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले विदेशी सहयोगमा सञ्चालन गरेका अधिकांश परियोजनाको हालसम्म शोधभर्ना भएको छैन । यसले सरकारलाई थप व्ययभार थप्ने देखाएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा उपलब्ध तथ्याङ्कले पछिल्ला आवहरूमा सरकारले दातासँग समयमा शोधभर्ना उठाउन नसकेपछि वर्षेनि त्यस्तो मौज्दात बढेको देखाउँछ । सरकारले आव२०७३/७४ मा मात्रै पनि रू. ४३ अर्बको बक्यौता उठाउन बाँकी छ । त्यसअघिको वर्ष रू. ३७ अर्ब शोधभर्ना हुन बाँकी छ । आव२०७१/७२ मा भने रू.३० अर्ब बक्यौता शोधभर्ना नभएको तथ्याङ्क छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले आयोजनाहरूको सार्वजनिक लेखा व्यवस्थापनमा ढिलासुस्ती हुने, प्रक्रिया नमिल्ने खर्च गर्ने निकायले समयमै प्रतिवेदन तयार गर्न नसक्ने, प्राविधिक समस्या समाधान नहुने र सम्झौताअनुरूप प्रतिवेदन तयार नहुने भएपछि वर्षेनिबक्यौता बढेको बताएको छ । अर्थमन्त्रालयमा प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलले भने अर्थमन्त्रालय मातहतका आयोजनामा समस्या नरहेको दाबी गर्दै सबै आयोजना प्रमुखलाई दातासँगको सम्झौताअनुरूपको कागजात तयार गरी सम्भव भएजति छिटो बक्यौता उठाइसक्न सरकारले निर्देशन दिइसकेको बताए ।